Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Cameroon
Nick Pope Childhood Story Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Alexander Sorloth Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Francisco Trincao Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
William Saliba Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Sheekada Carruurnimada Fabio Silva iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
AllCiyaartoyda Kubadda Cagta ee CameroonCiyaartoyda Kubadda Cagta ee GhanianCiyaartoyda Kubadda Cagta ee Ivory CoastCiyaartoyda Kubadda Cagta ee NigeriaCiyaartoyda Kubadda Cagta ee Senegal
Edouard Mendy Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Andre Onana Childhood Story Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Matheus Pereira Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Alex Telles Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Allan Loureiro Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Gabriel Magalhaes Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Sheekooyinka Kubadda Cagta ee Aasiya
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn
XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; 'Wazza'. Wayne Rooney Waalidiin Waalidiin iyo Waadi Waadi Karin Xaqiiqada Waalidka waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekada Life ka hor Cimilada, Nolosha Qoyska iyo waxyaabo badan oo caddayn ah oo aan caddayn oo yar oo ku saabsan isaga.
Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn -Nolosha Carruurnimada Hore
Wayne Rooney sida Baby
Wayne Mark Rooney Aka 'Wazza' wuxuu dhashay October 24, 1985, Thomas Rooney (aabaha) iyo Mrs Jeanette Marie (Hooyada) ee Croxteth Town, Liverpool, England.
Waalidiintiisa Mr iyo Mrs Rooney ayaa ahaa dad u dhashay Irish oo u soo guuray Liverpool, England. Taas macnaheedu waxaa weeye Wayne Rooney waa Irish fiican. Wayne Mark Rooney waa wiilka ugu wayn ee waalidkiis.
Wayne Rooney Waayo-aragnimada Caruurnimada hore
Sida wiil yar oo ku dhashay guri catholic gaar ah, Wayne Rooney ayaa loo sameeyey in ay ka soo qeyb galaan Our Lady iyo St Smithin ee dugsiga hoose. Ka dib qalinjabinta, wuxuu ku biiray De La Salle Humanities College. Kuleejka De La Salle Bani-aadamnimada ayaa loo sameeyay qaab ciyaareedkiisa kubada cagta. Tani waxa ay aheyd halka uu jacaylkiisa iyo xamaasadiisii ​​kubada cagta u koray, islamarkaana uusan aheyn ilaa iyo intii Rooney la arkay. Waxa uu tusaale wanaagsan u ahaa walaalihiis da 'yar yar Graham iyo Yooxanaa oo raacay tallaabooyinkiisa.
Wayne Rooney marnaba lagama kala soocin ciyaaraha kubada cagta ee caruurta. Jacaylka uu kubada cagta u qabo kubadda cagta ayaa markii ugu horreysay ogaaday sida uu uga jawaab celiyay markii kubada cagta ay qabteen maamulka iskuulka. Wayne Rooney ayaa iskuulka laga joojiyay labo maalmood kadib markii lagu laaday godka derbiga ee shaybaar saynis. Waxa uu ahaa mid careysan sababtoo ah kubada cagta waa la wareegay. Ka dib markii uu ganaax ku maqnaa, waxaa loo ogolaaday inuu sii wato riyadiisa kubada cagta, waqtigaan oo aan ku laadin shaybaarka sayniska, lakiin ciyaarta garoonka.
Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn -Waalidiinta iyo walaalaha
Wayne Rooney iyo Aabbaha
Wayne Rooney ayaa wadaagay a isku mid oo ay la socdaan aabihiis oo ay uga mahadcelinayaan muuqaalkooda qadhaadhka ah. Mr Thomas Rooney ayaa had iyo jeer ku dhawaadey wiilkiisa ugu weyn (Wayne Mark Rooney) inta lagu guda jiro sanadka koraya. Aad bay u adag tahay in la dilo aabaha - dhaarta wiilka ee u dhaxeeya iyaga.
Mid ka mid ah xaqiiqada caanka ah ee ku saabsan Mr Thomas Wayne Rooney (Snr) wuxuu la xidhiidhaa xiritaankiisa.
Sanadihii hore, aabihii Wayne Rooney ayaa waxaa xiray booliis si ay u baadigoobaan fekerka sharadka kubada cagta.
Saraakiisha, oo wakhti xaadir ah ku dhuftey guriga 450,000 ee Wayne Snr, ayaa sidoo kale xiray Wayne Rooney adeerkiis, Richie. Xarumaha baaritaanada ee kaadhka cas ee loo siiyay jimicsiga Stevewell's Steve Jennings kulan ciyaaraha Hearts ah. Waxaa la sii daayay ka dib markii uu fuliyay shuruudaha dammaanadda.
Wayne Rooney iyo hooyo
Hooyadiis, waxay ka soo jeedaa Liverpool, Merseyside. Hooyadiis sida waqtiga qoraagu waxay u shaqeysaa sida gabadh ciyaal ah oo ka mid ah wiilkeeda iskuulka (Wayne Mark Rooney) mar ay soo xaadireen.
Hooyo Irish waxay u dhalatay Tony iyo Colette McLoughlin oo markasta ahaa Ireland.
Isbedelka Jeanette Rooney
Heerka qofkastaa waa isbadal aan caadi ahayn. Haweeney aad u culus oo sawir qaadatay oo laga soo dejiyay xeebta 2003 ayaa tagay.
Wayne Rooney hooyada ayaa inta badan loo arkaa 'Hooyo oo dhan oo dhan'. Waxay mar horay u dhacday qalliin balaastig ah si loo bedelo qaabka wajiga, naaskaaga, gacanta iyo wajiga.
Maanta, xajmiga caloosha ayaa la yareeyay taas oo u oggolaaneysa in cunto yar la cuno. Waa arrin quseysa in ay ogaato in ay sidan u samaysay dhamaanteed magaca magaca ah ee ka soo qeybgalaya £ £ 3million ee arooska oo ah qof aan culeys lahayn.
Saddexda walaalaha ah ee walwalka ah waxay markiii ka soo qaybgaleen Our Lady iyo Dugsiga Sare ee St Smithin iyo kubada cagta ee De La Salle Humanities College.
Wayne Rooney iyo Younger Brothers (Waayo-aragnimada Carruurnimada)
Maanta, adduunkoodu waa kala duwan yihiin.
Wayne Rooney (Midig) iyo Graham Rooney (bidix)
Graham Rooney oo sawir laga qaaday sawirkiisa Wayne Mark Rooney Waxa uu u ciyaara Bariga Barclays Premier League Liverpool xilli ciyaareedka.
Graham Rooney ayaa mar horeba laga mamnuucay waddooyinka ka dib markii uu seddex jeer ku waday daroogada si uu u iibsado khamri xaflad. Tani waxaa soo raaca laba sano oo xayiraad lagu saarayo 2012. Ciqaabtu sidoo kale waxaa ku jira ganaax ah $ 650 iyo 150 saacadaha adeega bulshada. Booliska ayaa sheegay in uu ahaa mid xoogan, wuxuuna ku hanjabay inuu ku soo oogi doono inuu ku xadgudbo xaaskiisa £ 450,000 guriga raaxada ee Liverpool.
John Richard Rooney waa Walaalkii Wayne. Sida walaalka Wayne ee walaalkiis ah, John mar hore ayuu mustaqbalkiisa ciyaareed ku qaatay Everton. Wuxuu haatan u ciyaaraa Wrexham isagoo horay u soo ciyaaray (sida waqtigii qorista).
Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn -Jacaylka Nolosha.
Wayne Rooney, wuxuu la kulmay xaaskiisa Coleen Mary McLoughlin da'da 12 ee xaafada Liverpool ee Croxteth. Marka hore waxay ahaayeen saaxiib. Waxay bilaabeen xiriirka markay da'doodu tahay 16, ka dib markii ay ka tageen dugsiga sare.
Wayne Rooney Marriage Wedding
Xiriirintooda ayaa sii xoogeystay sannadaha oo dhan, taas oo ay uga mahadcelinayaan Wayne Rooney habka daryeelka iyo jacaylka. Wayne Rooney ayaa shaaca ka qaaday inuu jecel yahay inuu si joogta ah u qoro gabayga jacaylkiisa xaaskiisa Coleen. Ka dib markii sannado badan lagu guuleystey, labaduba waxay go'aansadeen inay xiraan kabaha. Arooskoodii waxay ka dhaceen Portofino, Italy on 12 June 2008. Lammaanaha waxaa la siiyay £ 2.5 £ UK oo la soo sheegay! wargeyska loogu talagalay macluumaadka arooska iyo sawirada gaarka ah. Kadib markay arooskooda, labada lamaane waxay gurigooda ku soo galeen gurigooda 1.3m ee ku yaala magaalada Formby. Xilliga qorista, waxay hadda ku nool yihiin Prestbury, Cheshire, oo ku jira £ 4 million mega aqal-galbeed Neo-Georgian.
Wayne Rooney iyo qoyskiisa
Wakhtigan la qorayo, guurka reer Wayne Rooney haatan waxaa lagu soo dhaweeyay saddex carruur ah oo qurux badan.
2 November 2009, xaaskiisa Rooney ayaa dhalatay caruurteedii ugu horeysay ee uu magacaabay Kai Wayne Rooney.
21 May 2013, xaaskiisa Rooney ayaa dhalatay wiilkiisii ​​labaad Klay Anthony Rooney.
On 24 Jannaayo 2016, Rooney ayaa u dhashay wiilkeeda seddexaad Kitty Rooney.
Wakhti ku qaadashada qoysku waa qayb ka mid ah xannaaneynta iyo daryeelka badan ee adduunka Wayne.
Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn -Qalitaanka Timaha
Wayne Rooney Bedelka Timaha
Wayne Rooney ayaa caqabad ku noqday inuu sii korayo. Waxa uu maray timo bedelid markii uu ahaa 25 sano jir. Daaweynta timaha waxaa lagu sameeyey Isbitaalka Xarunta caafimaadka ee Harley Street ee London ee 2013.
Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn -Xiriirka kubadda cagta ee dhalinyarada.
Riyada Rooney ee ah inuu noqdo xiddig kubadda cagta ah ayaa bilaabay maalintiisii ​​hore ee dugsiga sare markii uu bilaabay kubbadda cagta sida dugsiga Schoolboy.
Wiil yar oo iskuulka ah ayaa heystey rikoodh goolal dhalinta 72 hal xilli ciyaareed, taas oo jabisay iskuul kale oo Liverpool ah, Gerard oo ku yaal 2010.
Markii uu sagaal sanno jir ahaa, waxaa la arkay Bob Pendleton wuxuuna weydiistay inuu ku biiro "Everton FC". Rooney ayaa ku biiray kooxda dhalinyarada ee Everton, kaas oo uu ku soo bandhigay kulankiisii ​​ugu horeeyay ee xirfadiisa kubadda cagta ee 2002 da'da 16.
Toddobo sanno gudaheed oo uu ku biiray kooxda dhalinyarada Everton, wuxuu kulankiisii ​​ugu horeeyay u saftay kulan saaxiibtinimo, waxaana uu gool ka dhaliyay 2002.
Rooney ayaa ku guuleystay abaalmarinta 19th ee October 2002 markii uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa gool dhaliyaha taariikhda Premier League ee 16 iyo maalmaha 360 isagoo u ciyaaraya Everton inkastoo rikoorkaan laga soo bilaabo tan iyo laba jeer.
Goolkiisa uu ka dhaliyay Arsenal ayaa ahaa guushii ugu danbeysay ee uu ku guuleysto, waxaana uu soo gabagabeeyay guuldaradii Chelsea ka soo gaartay 30.
Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn -Dhibaatooyinka
2006, Rooney ayaa heshiis ku dhowaad $ 7 million ka soo iibsaday HarperCollins si uu u qoro buugiisa, Wayne Rooney: Muuqaalkeyga ayaan ka fogahay. Buuggan ayaa Rooney ku dhuftay biyo kulul oo uu kula jiray tababarihiisii ​​hore ee Everton, David Moyes, kaasoo dacwadiisii ​​hore ku eedeeyay inuu been ka sheego. Labadaas waxay gaadheen heshiis aan la shaacin ka hor inta aan kiiska la arkin qolka dhegeysiga. Wayne Rooney ayaa tan iyo laba buug oo kale ku qoran isagoo qeyb ka ah heshiiskiisa HarperCollins.
Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn -Gubashada WWE SuperStar
Wayne Rooney ayaa kaliya ku guuleystay Aabaha Sanadka, isagoo dhoola cadeynaya xiddiga WWE ka hor wiilkiisii ​​hore ee Manchester United Arena.
Daawashada WWE qaydhiin oo ay ka mid yihiin ringside oo ay la socoto Kai lix-sano jir ah, kubadda cagta ayaa waxaa ku dhacay muraayado taxane ah oo loogu talagalay cayaarta tartanka Brit Bare Wade Barret. Isagoo kaashanaya saaxiibkiisa kooxda Seamus,
Wayne Rooney ayaa ku farxay inuu ku dhufan karo kubada cagta, waxaana uu daawanayaa inuu dhulka ku dhaco, taas oo run ahaantii, laga yaabo inay ka yar tahay wax ka badan ciyaaryahan kasta oo ka ciyaara Premier League ka dib markii uu tuuray Wayne Rooney.
Wayne Rooney Sheeko Sheeko Weyn -Waxyaabaha Aan Laheyn Biyootooyinka iyo Xaqiiqooyinka
Iyadoo mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan kubada cagtu, Rooney ayaa heshiisyo qadarin ah la leh shirkadaha Nike iyo EA Sports.
Coca-Cola waxay ku dhameysatay xiriirkii ay la laheyd xiddiga Manchester United ee 2011 ka dib fadeexad la xiriirta eedeymaha la xiriirta dhilleysiga iyo isticmaalka ula kac ah ee ereyga ah intii lagu jiray ciyaar telefishan ah.
Xaaska Rooney Coleen Rooney ayaa ku soo bandhigtay noloshooda hooyo iyadoo wiilasha Kai iyo Klay ay ku jiraan sawir cusub, Wayne Rooney.
Sheekada Carruurnimada Mikel Arteta Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada John Lundstram Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
KUBBADA CAGTA EE CLASSIC
Lucas Digne Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin
Idrissa Gueye Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 26, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 25, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 23, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 19, 2020
Dominic Calvert-Lewin Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
Jibriil Sidibe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xaddidan
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 4, 2020
Marcus Rashford Sheeko Waaweyn Xogta Warka Xaddidan
Michael Keane Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha